एकाबिहान राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परिक्षा संचालन बारे दियो यस्तो आधिकारिक सुचना ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/एकाबिहान राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परिक्षा संचालन बारे दियो यस्तो आधिकारिक सुचना !
काठमाडौं, असोज १९ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कक्षा १२ को परीक्षा लिखितरुपमै लिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । उनले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले लिखित लिनुको विकल्प नभएको जनाए । *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
मन्त्रालयको पछिल्लो तयारीको अवस्था विश्लेषण गर्दा मंसिरयता परीक्षा हुने छाँट देखिएको छैन । मन्त्री पोखरेलले भने अन्तिम तयारी भइरहेको दाबी गरे । मन्त्रालयले कोही पनि विद्यार्थीलाई सवारीसाधनको सुविधा भएको घर पायक र परीक्षाका लागि डेरा खोज्न नपर्ने स्थानबाट परीक्षा दिने गरी व्यवस्थापन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
क’रेन्ट लागेर एकजनाको मृ’त्यु
कक्षा १२ मा पढ्ने युवाको गुहार मलाई ब्लोड क्यान्सर छ, बचाई दिनुस म बच्न चन्हन्छु !